Ayixoxwe eyokhetho loHulumeni Bendawo - Bayede News
UNetanyahu nelinye ithuba lokusungula uHulumeni
Ukhetho luyisikali esimqoka ngaphansi kwedemokhrasi. Yilo olunika abantu ithuba lokuba bajezise noma baklomelise abaholi. Nonyaka kulindeleke ukuba kube nokhetho loHulumeni Bendawo nolumqoka kakhulu ngoba lapha kusuke kukhulunywa ngabaholi esibabona nsuku zonke. Ngokwethu yilo lolu khetho olumqoka ngoba uHulumeni Wendawo usondele kakhulu kubantu nasezidingweni zabo. Yize singababukeli phansi abanye ohulumeni kepha iqiniso lithi abagqoka omatapolo bentuthuko akubona laba abasePhalamende kepha yilaba abakomasipala. Ngisho ulaka lomphakathi luphumela kubo. Uthi umuntu efuna isikole amashele ikhansela ngokoMthethosisekelo elingahlangene nokwakhiwa kwezikole.
Yize ingakabi bikho ezithebeni kepha iyanda inkulumo ethi ukhetho lolu olulindelwe ngabovu nonyaka kaluhlehle. Izizathu zikhuluma ngokhuvethe. Abeseka ukuba luhlehle bathi ngeke bakwazi ukukhankasa ngoba izixuku kazivunyelwe nokuthi kuyoba yingozi ukungena umuzi nomuzi.
Esimweni esejwayelekile lezi yizizathu eziyizo kepha ezweni lapho kukhona izikhalo ngohlobo lwabaholi kungahle kusho ukuphunyuka kwezigangi. Kanjani na? Phela uma luhlehla noma ngabe luba ngonyaka ozayo noma ngowezi-2024 njengoba abanye besho kuyosho ukuthi umholi ogila imikhuba manje welulelwa isikhathi sokuthi akaqhubeke asavune imali noma agile imikhuba. Okusho ukuthi imiphakathi iyolokhu ihleli nalo mhlola kuze kuba kuphela ukhuvethe. Angikhulumi ke eyokuthi nakhuvethe lolo akekho ohlakaniphe nosazi ukuthi luzophela nini okusho khona ukuthi sihleli nesimo esingazi siyolunga nini.
Okunye, ukuhlehla kokhetho yize kuhlinzekelwe kuMthethosisekelo kungadala izinkinga ebezingalindelekile kweminye imiklamo kaHulumeni kuphambanise nezinhlelo. Yikho sinomuzwa wokuthi lolu daba alungabi nje olosopolitiki kepha nezakhamuzi kazibuzwe ukuthi zibona ukuthi kungadlulwa kanjani. Futhi abantu batshelwe amaqiniso ngezizathu zokuhlehlisa nemiphumela yalokho ngoba kuvamile ukuthi nalaba abasiphethe bagcine sebesicabangela kuze kweqe.